Giroud oo soo dhaweeyay sida uu u saxnaa go’aanka Sarri iyo in la meel marin karo – Gool FM
Giroud oo soo dhaweeyay sida uu u saxnaa go’aanka Sarri iyo in la meel marin karo
(Chelsea) 27 Jan 2019. Weeraryahanka kooxda Chelsea Olivier Giroud ayaa soo dhaweeyay dhaleeceyntii tababare Maurizio Sarri uu u jeediyay ciyaartoyda Blues, kadib guuldaradii 2-0 ahayd ee kaga soo gaartay Arsenal horyaalka Premier League todobaadkii hore.
Olivier Giroud ayaa ka jawaab celiyay su’aal ku aadaneyd, hadii ay xaq tahay eedeymaha uu tababare Maurizio Sarri u jeediyay ciyaartoyda Blues.
Hadaba wargeyska “Daily Mail” ee dalka England ayaa soo xigtay jawaab celinta uu bixiyay Olivier Giroud wuxuuna yiri:
“Haa, marka hore ma aanan fiicneyn, waxaan luminay kulamo dhowr ah, ma dooneyno in aan wax badan ka hadalno arintan, lakiin waan ogeyn inaan u baahanahay jawaab celin adag”.
“Waxay ahayd inaan wax badan u muujinno Tottenham kulankii Carabao Cup, sida shaqsiyad xoogan, waxay ahayd inaan garoonka gudihiisa ku noqono kuwo bahalo ah, si fiican ayaana arintaas u sameenay waana ku guuleysanay”.
“Waxaan nahay xirfadleyaal waana ognahay inaan si wacan u ciyaari karno, waxaan u baahanahay inaan sameyno wax badan, waan wada hadalnay, intaas kadib waxaa muhiim ah inaan awoodayada ku dhex muujino gudaha garoonka”.
Gonzalo Higuain oo Caawa kulankiisii ugu horreeyay u safanaya Chelsea.....(Eeg SHAXDA ay ku soo galeyso Blues)
Tababare Allegri oo ku dhawaaqay liiska xidigaha kooxda Juventus uu ula safri doono kulanka caawa ee Lazio – (Yaa Ka Maqan Yaase Ku Soo Baxay?)